Xukuumadda oo sharci kasoo saaraysa wadayaasha gaadiidka waaweyn ee safarka kuna xadgudba shuruucyada waddooyinka.
Waxaa diyaarisay: Trine Solberg
Sida uu tebiyey telefishinka NRK dowladda ayaa doonaysa in ay dalka ka saarto darawalada gaadiidka waaweyn ee gala qalad weyn oo lid ku ah shuruucda waddooyinka, taasoo keenina karta inaysan wadayaashu muddo ku soo noqon dalkan.
–Dulqaadkii aan u haynay wadayaasha shisheeye ee tareeleyaasha aann ilaalin sharciyada waddooyinka waa naga dhamaaday ayuu yiri wasiirka gaadiidka dalkan Jon Georg Dale (Frp) oo NRK u waramay xilli ay kulansaneeyeen wasiirka cadaaladda Jøran Kallmyr (Frp).
Wasiiradu waxay diyaarinayaan soo jeedin ku aadan in wadayaasha haysta degannaanshaha ku meel gaarka ah ee dalka, kuwa u dhashay dalalka EØS ee waqti yar deganaa dalkan ahna wadayaal ka yimid dal EU-/EØS laga saari karo dalka haddii ay sharciga waddooyinka jabiyaan ayaa lagu yiri war uu qoray NRK.
Dowladda ayaa doonaysa in soo jeedintaan baarlamaanku ansixiyo ka hor waqtiga qaboobaha ee soo socda sida uu qoray NRK.